Nalonetardiary - Page 103 of 103 - Media and Entertainment
အိမ်မှာ ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေးလိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်
အိမ်မှာ ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေးလိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ..ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ကင်းဝေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…. ရှေးရှေးတုန်းကလည်း ကျောက်ရောဂါ..ပုလိပ်ရောဂါ.. ဝမ်းရောဂါ အစရှိသဖြင့် ကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတယ်…။ တရွာလုံး ရွာလုံးကျွတ် ကူးကုန်ပြီးလူတွေ အကုန်သေကြသတဲ့.. လူတွေသေတော့ မကောင်းဆိုးရွားတွေ ပျော်တာပေါ့.. သူတို့တွေ ပျော်မြူးပြီး ရွာတွေထဲ ဝင်လာကြသတဲ့.. ရွာတွေ ထဲက လူတချို့လည်း တခြားလွတ်ရာ ရှောင်တဲ့လူကရှောင်..ပြောင်းတဲ့လူက ပြောင်းပေါ့….အဲလိုနဲ့ ရွာတွေဟာ တစပြင် လို အကုန် လူခြေတိတ်ပြီး ခြောက်ကပ်နေတာပေါ့.. ဒါပေမဲ့….ရွာတစ်ရွာမှာတော့ တဲစုတ်စုတ် အိမ်လေး တစ်အိမ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေ ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘဲ အကောင်းတိုင်း ကျန်နေသတဲ့…. မကောင်းဆိုးရွားတွေလည်း အဲဒိတဲစုတ်လေးထဲ ဝင်ဘို့ … Read more
Categories Knowledge Tags ကပ်ရောဂါ
အကျင့်ဆိုးလေးတွေရှိပေမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေအကြောင်း
April 12, 2020 by Nalonetar Diary
အကျင့်ဆိုးလေးတွေရှိပေမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေအကြောင်း အငယ်ဆုံးတွေဆိုတာ မိသားစုထဲမှာ ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးလို့ရတက်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေတော့ရှိတယ် ဒါမဲ့ စိတ်ရင်းကောင်းထားတက်ကြသလို အချစ်ရေးမှာလည်း သူ့ချစ်သူအပေါ်အချစ်သန်ပြီး မမူးပဲရစ်တက်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူလေးတွေလေ သူတို့ကိုချစ်ရင် အချစ်ကြီးလွန်းလို့ အစစအရာရာ.အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်မူတွေအပြည့်ခံရတက်ကြတယ် သူလေးတွေပါ မဟုတ်မခံ ဆိုပေမဲ့ အရာရာကိုမတွေးတောပဲ တဇွတ်ထိုး နိုင်တက်ကြတယ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ တခုခု ဖြစ်လာရင် လက်မြန်ခြေမြန်တက်ကြသူတွေပါ မိသားစုအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာတော့ အရမ်းကိုကောင်းတတ်ကြတယ် အိမ်မှာ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ချင်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကူညီဖို့ အမြဲတမ်း အစဉ်သင့် ဖြစ်နေသလို ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရ မညီးညူပဲ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ထားလေးရှိတယ် ထပ်ပြောပါမယ် အငယ်ဆုံးလေးတွေဆိုတာ ဆိုးချင်နွဲ့ချင်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ ယုတ်မာတဲ့စိတ်ထား လုံးဝမရှိပါဖူးဗျာ… ဟုတ်တယ်ဆိုရင် အငယ်ဆုံးလေးတွေ ရှယ်သွားလိုက်ကြတော့ ပေသီး Unicode အကငျြ့ဆိုးလေးတှရှေိပမေယျ့ … Read more
Categories Careers Tags အငယ်ဆုံးလေး
တရုတ်ကပြောပြသော ကိုဗစ် ကာကွယ်နည်းလျှို့ဝှက်ချက် ..
တရုတ်ကပြောပြသော ကိုဗစ် ကာကွယ်နည်းလျှို့ဝှက်ချက် ကိုဗစ် ကာကွယ်နည်းလျှို့ဝှက်ချက် တရုတ် ကဖော်ပြောလိုက်ပြီ Doctors in China confirm. (မွနျမာစာမမှနျပါကအောကျတှငျ ဆှဲဖတျပါ) This information is 100% accurate Very effective for everyone 這 是 100 ％ 準確 的 信息 ， 對於 每個 人 都 非常 有效。 တရုတ်ပြည်မှဆရာဝန်များက လူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိစေမည့် တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည့်အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောကြားလိုက်ပါသည်။ 為什麼 中國 大陸 過去 幾天 大大 減少 了 感染 人數 China has significantly reduced the number … Read more
Categories Hearth Tags ကိုဗစ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ပြည့်ဝသူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာရပ်များ ၁။ ပြန်ရဖို့ မမျှော်လင့်ဘဲ ပေးဆပ်တတ်တယ်။ ၂။ အငြိုးအတေးတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေတယ်။ ၃။ မိမိဘဝထဲက ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကို ကျေးဇူးတင်တတ်တယ်။ ၄။ တခြားသူတွေကို ဦးစားပေးတတ်တယ်။ ၅။ အလုပ်နဲ့ဘဝကို ဟန်ချက်ညီအောင် တည်ဆောက်ထားတယ်။ ၆။ ဗဟုသုတတွေကို အမြဲရှာဖွေဆည်းပူးတတ်တယ်။ ၇။ လိုက်လျောညီထွေနေတတ်တယ်။ ၈။ စိတ်ကောကိုယ်ပါ ကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်တယ်။ ၉။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့လူတွေကို ရှာင်ကြဉ်တယ်။ ၁ဝ။ မိမိရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို ကောင်းစွာသိပြီး ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက် စနစ်တကျ အသုံးချတတ်တယ်။ ၁၁။ နှစ်သက်ရာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်တတ်တယ်။ ၁၂။ အချိန်ဆွဲတာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်တယ်။ သိမှတ်စရာလေးတွေကို မျှဝေဖို့ ဒီစာစောင်လေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါဦးနော်။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ဂန္ထဝင် မဂ္ဂဇင်း Unicode စိတျပိုငျးဆိုငျရာရငျ့ကကျြပွညျ့ဝသူတဈယောကျရဲ့လက်ခဏာရပျမြား … Read more
Categories Careers Tags စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အတာစားသော ကြာသပတေးသားသမီးများ ရှောင်ရန်
အတာစားသော ကြာသပတေးသားသမီးများ ရှောင်ရန် “အတာ”ဟူသည် ” နောက်ဆုံး ကာလ၊ အကျပိုင်း ကာလ” ကို ဆိုလိုပါတယ် “အတာရက်”မှာ သင်္ကြန် အတက်ရက် ဖြစ်၏။ နှစ်တစ်နှစ်၏နောက်ဆုံးရက်ပင် ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်အတက်ရက်နှင့် မွေးနေ့ တိုက်ဆိုင်သူများသည် “အတာသင့်”သူများ ဖြစ် ပါသည်။ ၎င်းကို ” အတာစား ” သည်ဟု ပြောဆို သုံးစွဲနေကြတာဖြစ်ပါသည်။ အတာစားတဲ့ သူများဟာ အတာရက်မှာ ကောင်းမှု ကုသိုလ် များ လုပ်သင့်ပါသည် ။ မလုပ်မိလျှင် တစ်နှစ်လုံး အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးကံ ညံ့တတ်ပြီး ကုသိုလ် ယတြာလုပ်ရင် တစ်နှစ်လုံး သူများထက်ပိုပြီး ကောင်းကျိုးရတတ်ပါတယ် လို့ စာဆို ရှိပါသည်။ အတာစားသူများ ရှောင်ရန် အတက်နေ့နှင့် နစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တို့တွင် … Read more
Categories Knowledge Tags အတာစား